Chikumi 12, 2018 arun
$20M Eteri hacked kubva havaratidzi configured Ethereum Apps
Maererano Chinese Internet kuchengeteka yakasimba Qihoo 360 Netlab, hackers vaba $20 mamiriyoni Eteri kubva havaratidzi configured Ethereum migodhi rigs uye chechitatu-party zvikumbiro. Nyanzvi panguva akasimba vanoti cyber kurwiswa kuvavarira unsecured Ethereum nodes paIndaneti.
kambani kuchera Crypto kuti dziri London Stock Exchange
A kambani itsva anorega vanhu vangu cryptocurrencies kuburikidza dzeserura uye makombiyuta vachishandisa kuzvinyoresa basa akazivisa urongwa kunyora pamusoro London Stock Exchange, kutanga Exchange.
Argo Blockchain wakati anotarisira kurera £ mamiriyoni 20 vari dzokushandura uye anotarisira kuti kukosheswa panguva kumativi £ mamiriyoni 40. Argo anoti uchava crypto boka rokutanga mugodhi kubatana pamusika wemari London kwakaita.
Financial Services indasitiri inopedza $ 1.7B pamusoro blockchain
The zvemari Services indasitiri inopedza $1.7 bhiriyoni gore negore pasi zvakaparadzira ledgers, maererano mutsvakurudzi Greenwich Associates.
Kudzidza inoratidza zvemari yakawandisa blockchain yakawedzera 67% gore rapera, pamwe chete mu 10 nemabhengi dzimwe yemakambani kushuma mari zvinopfuura $10 miriyoni. zvakafanana, uwandu vashandi kushanda blockchain zvirongwa nekaviri gore rapera.
Richard Johnson, mutevedzeri womutungamiriri Greenwich Associates Market Structure uye Technology akati anopfuura matatu-mumativi muzvirongwa kuti vari pari pasi kukura vanotarisirwa kuenda kurarama mukati mumakore maviri.
CFTC zvinoda crypto exchanges kugoverana zvokutengeserana Data
The US COMMODITY hwamangwana Trading Commission (CFTC) yakumbira kuti akawanda crypto mari exchanges – Bitstamp, Coinbase, itBit uye Kraken – Exchange zvokutengeserana Data kuziva kana evanhu ari kukanganisa crypto musika.
Nepo kuongorora kuti CFTC raMwari achiri vachiri Danho, zvinoratidza kuti regulators vane chakakomba kufarira pakupfeka crypto exchanges pasi wayo cherechedzo. Zvikuru sei, ari CFTC riri kuongorora kana musika ari sei nekutengeserana miitiro yakadai spoofing kana vatengesi muchipinda makuru chakagadzirwa mutengo kunowedzera.
mabhanga Korean kuzoshandisa blockchain kuti dzipupurire mutengi ID raMwari
A National rwezvemabhengi boka muSouth Korea anoronga kumonera mumwe blockchain-inobva ID ongororo marongedzero mudzimba vezvokutengeserana mabhanga.
Nyika itsva, BankSign, ichapa vemunzvimbo mabhanga nezvechisarudzo yokutsiva huripo ID ongororo hurongwa kuti yave iri nzvimbo emakore mu South Korea.
The idzva blockchain ID basa, iyo ichange ichiwanikwa vose paIndaneti uye Mobile rwezvemabhengi, ndipo rokutanga kuitwa kubudikidza yezvokutengeserana mabhanga muSouth Korea kuti blockchain mafomu iripo kungopa vatengi.
Kraken Daily Market Mushumo 11.06.2018
$212M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Chikunguru 19, 2018 pa 5:14 PM
Riley Doig anoti:
Nyamavhuvhu 2, 2018 pa 8:16 AM
Gumiguru 23, 2018 pa 6:13 AM
Gumiguru 23, 2018 pa 6:17 AM